सूर्या लाइफको ७० प्रतिशत हकप्रदका लागि बुधवार बुक क्लोज
साउन २८, काठमाडौं (अस) । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद प्रयोजनका लागि साउन २९ गते (बुधवार) एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । भदौ ८ गतेबाट ७० प्रतिशत हकप्रद विक्री खुला गर्न लागेको कम्पनीले बुधवार बुक क्लोजको मिति तोकेको हो ।
बुक क्लोजको आधारमा मंगलवार (साउन २८) गतेसम्म कायम रहने शेयरधनी मात्र हकप्रद भर्न योग्य हुनेछन् । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । हकप्रद शेयरलाई केयर रेटिङ नेपालले औषतभन्दा कमजोर आधार जनाउने ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १३ करोड १९ लाख रहेको छ । कम्पनीले असार १० गते पारित गरेको १२ प्रतिशत बोनस शेयर मङ्गलवार नेप्सेमा सूचीकृत गरेको छ । उक्त बोनस शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २६ करोड ७७ लाख २८ हजार पुगेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न लागेको हो । यो हकप्रद पश्चात भने चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुग्नेछ । कम्पनीको हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया क्यापिटल नियुक्त भएको छ ।